अचम्मको पार्क ! जहाँ निर्वस्त्र नुहाउदै यौनको स्वाद लिन पाइने « रंग खबर
अचम्मको पार्क ! जहाँ निर्वस्त्र नुहाउदै यौनको स्वाद लिन पाइने
रंग खबर, काठमाडौँ | अहिले विश्व मनोरंजन मोडमा हिडिरहेको छ । दुनियालाई सन्तुष्टि र मनोरंजन चाहिएको छ । र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न दिन प्रतिदिन दुनियामा अनेकन अनेक सिर्जनाहरु गर्ने गरिन्छ । मनोरंजनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थानको रुपमा पार्क पनि पर्ने गर्दछ । विश्वमा अहिले विभिन्न अत्याधुनिक सुबिधा सम्पन्न पार्कहरु निर्माण गरिएको छ । र ति पार्कहरुबाट सर्वसाधारणले मनोरंजन लिईरहेका छन् । सन्तुष्टि र मनोरंजनका लागि दुनियामा एक से एक चमत्कारी पार्कहरु बनिसकेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्समा फरारी वल्र्ड छ भने चीनमा डुअर्फ अम्पाएर ।
त्यस्तै अर्जेन्टिनामा द रिपब्लिक अफ चिल्ड्रेेन नामक भव्य पार्क छ । तर अब ब्राजिल दुनियाका यी सबै दामी र नामी पार्कहरु भन्दा एक कदम अघि बढ्दैछ । ब्राजिलमा वाइल्ड तथा रोचक पार्क बनाउने तयारी भैरहेको छ । यो पार्कमा अन्य पार्कको तुलनामा भिन्न सुबिधा हुनेछ । उक्त पार्कको थिम हुनेछ सेक्स ।
पिरासिकाबा सहरमा बनाइने यस इरोटिक ल्याण्ड पार्कमा केवल वयस्कहरुले मात्र प्रवेश पाउनेछन् । यो पार्कमा प्रवेश गर्न १ सय डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यहाँ सेभेन डी सिनेमाको सुविधा पनि हुनेछ । बस्ने सिटहरु चलायामान हुने यस पार्कमा मानिसहरु निर्वस्त्र पौडी खेल्न पाउनुका साथै एक सेक्स प्लेग्राउण्ड पनि हुनेछ । त्यहाँ ठूला ठूला कारहरु पनि गुप्तांगकै आकारका हुनेछन् । स्न्याक बारमा पनि कामोत्तेजक चिजहरु पाइनेछन् । यद्यपि पार्कभित्र रमाइलो गर्न छिरेका जोडीहरुलाई सम्भोगको अनुमति भने हुनेछैन । यदि मानिसहरुलाई पार्क घुम्दाघुम्दै यौनको इच्छा जाग्यो भने जोडी कसेर नजिकैको मोटेलमा छिरे हुन्छ ।
। यद्यपि बन्न सुरु नहुँदै यस पार्कको विरोध सुरु भैसकेको छ । यस्तो यौनिकताले भरिपूर्ण पार्क सहरमा राख्दा गलत सन्देश जाने विरोधकर्ताहरुको दाबी छ । पिरासिकावा सिटी काउन्सिलका सदस्य म्याथ्यूज अर्लरले आफ्नो सहर सेक्स क्यापिटलको रुपमा चिनियोस् भन्ने आफुले नचाहेको बताएका छन् ।
उक्त पार्कमा स्वास्थ्य तथा यौन सुरक्षाको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गरिनेछ । त्यहाँका कर्मचारहिरुले पाहुनाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला कण्डमको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछन् । त्यसका साथसाथै मानिसहरुलाई यौनिकताको इतिहासका बारेमा जानकारी प्रदान गरिनेछ ।